Cristiano Ronaldo wuxuu gaaray 700 gool… Immisa rigoore ayaa ku jirta?? – Gool FM
(Europe) 15 Okt 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus iyo xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa waxaa si aad ah ugu xiran malaayiin taageerayaashiisa ah, rikoorrada uu sameynayo waxaa lagu tiriyaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu caansan marka loo eego baraha bulshada ay ku xiriirto, iskaba daayee xitaa waxaa la dhihi karaa waa shaqsiga ugu caansan caalamka ay ku xiran yihiin taageerayaasha ugu badan.
Laakiin maadaama malaayiin dad ah ay taageersan yihiin Cristiano Ronaldo, sidoo kale waxaa jira tiro aad u badan oo had iyo jeer si aad ah u neceb isaga, dabcan inta ugu badan waa taageerayaasha kooxda Barcelona iyo taageerayaasha Lionel Messi, tanina waa wax iska caadi ah marka loo fiiriyo taageerayaasha kooxaha Real Madrid iyo Barca, dhinac kasta wuxuu isku dayayaa inuu carqaladeeyo midka kale.
Kaddib markii uu Cristiano Ronaldo gaaray goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay illaa iyo haatan ciyaara kubadda cagta ee guushan gaaray, haddana waxaa jira dad badan ee isku dayay inay ku jees jeesaan iyagoo tilmaamaya tirada inta rigoore ee kaga jirta goolashan.
Haddaba su’aasha taagan ayaa waxay tahay Cristiano Ronaldo wuxuu gaaray 700 gool… Immisa rigoore ayaa ku jirta??, iyadoo goolkii uu xalay dhaliyay ahaa mid rigoore ah.
605 gool uu soo dhaliyay heer kooxeed, Cristiano Ronaldo wuuu dhaliyay 103 rigoore oo kaliya, cel celis ahaan 17% marka loo fiiriyo wadarta guud ee goolashiisa, halka xulkiisa uu u dhaliyay 8 rigoore, 95 gool uu guud ahaan u soo dhaliyay, cel celis ahaan 9%.
Guud ahaan, Cristiano wuxuu dhaliyay 111 gool oo rigoorayaal ah heer kooxeed iyo xulkiisa qaranka Portugal kaddib 700 gool uu dhaliyay xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta, taasoo cel celis ahaan ka dhigay kaliya 15%, waana tiro u dhiganta ku dhawaad ​​dhamaan weeraryahanada adduunka ee tuura rigoorayaasha.
Tusaale ahaan, Lionel Messi waxa uu dhaliyay 85 rigoore ee ka mid ah 668 gool uu dhaliyay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta heer kooxeed iyo xulkiisa qaranka, cel celis ahaana waa 13%, taasoo muujineysa in labada ciyaaryahan ay si aad ah isugu dhow yihiin, sidaas darteed tirada goolasha rigoorayaasha uu dhaliyay Cristiano Ronaldo waa xad macquul ah.